Global Voices teny Malagasy » Vietnam: Nangataka Ireo Mpisera Aterineto Mba Hanampy Azy Hitady Ny Zanany Tsy Hita Ny Raim-pianakaviana Iray · Global Voices teny Malagasy » Print
Vietnam: Nangataka Ireo Mpisera Aterineto Mba Hanampy Azy Hitady Ny Zanany Tsy Hita Ny Raim-pianakaviana Iray
Voadika ny 09 Avrily 2018 19:51 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Azia Atsinanana, Vietnam, Mediam-bahoaka, Teknolojia, Vonjy Voina
Dimy ambinifolo taona lasa izay (2010) no nahita farany ny zanany vavy dimy taona antsoina hoe Nguyen Truong An i Nguyen Minh Chau avy any Vietnam. Efa nandeha tany amin'ny toerana maro toy ny tany an-tanàndehiben'i Ho Chi Minh , ny faritanin'i Binh Duong, ary tany Laos mihitsy aza izy mba hitady ny zanany vavy. Niseho tao amin'ny fahitalavi-pirenena sy ny onjam-peo ihany koa izy mba hangataka fanampiana. Saingy tsy nahita ny zanany vavy izy. Nangataka  ny fanampian'ireo mpisera ity raim-pianakaviana efa kivy nitady ny zanany vavy efa hatry ny ela ity.
Araka an'i Chau, izay monina ao amin'ny faritanin'ny vinanin'i Mekong any Tien Giang, tsy hita popoka tamin'ny 10 desambra 1995 ny zanany vavy. Nilalao teo akaikin'ny tranony no nahitana azy farany niaraka tamin'ny zazavavy kely iray hafa izay zanakanabaviny antsoina hoe Diem My . Samy dimy taona avokoa ireo zaza roa ireo tamin'izany fotoana izany.
Tamin'ny volana Janoary 2010, nampian'ny havany tamin'ny famoronana tranonkala i Chau mba hanangonana ny fanadihadiana sy ny tatitra momba ny zanany tsy hita. Ity ambany ity ny hafatra fampidirana  nataon'i Chau
Teraka tamin'ny taona 1990 ny zanako vavy. Nisy naka an-keriny izy tamin'ny faran'ny taona 1995 ary mbola tsy hita. Izy sy ny zazavavy kely iray (mitovy taona aminy) dia very ny takariva tamin'io andro io ihany talohan'ny faran'ny taona 1995. Nitady azy nandritra ny 15 taona ka hatramin'izao ny fianakavianay niaraka tamin'ny fanampian'ny olona maro, gazety ary ny mpitandro filaminana; saingy tsy nisy vokany. Manantena aho fa afaka hanampy anay ity tranonkala ity …
Nankasitraka ny fanampim-baovao rehetra azony avy tamin'ny mpisera i Chau
Mankasitraka ny fanampim-baovao rehetra momba ny zanako vavy avy aminareo izahay!
Nahasarika valiny maro tao Vietnam ny tranonkala sy ny fanapahan-kevitr'i Chau hitady ny zanany vavy. Talohan'ny faran'ny volana Janoary 2010, manodidina ny olona miisa 100.000 no efa nitsidika ny tranonkala. Naharay antso an'arivony i Chau izay naneho ny fanohanana azy.
Manantena i Chau fa afaka hanampy azy ny vondrom-piarahamonina an-tserasera. Notantarainy io faniriana io nandritra ny antsafa  niarahany tamin'ny Vietnam Bridge.
Nalahelo hatrany ny zanakay vavy izaho sy ny vadiko. Tena tianay ny zanakay vavy tsy hita. Tsy fantatray raha miaina sambatra izy any na tsia. Amin'ny alalan'ity tranonkala ity, manantena aho fa hanampy ahy hahita ny zanako vavy ny vondrom-piarahamonina antserasera
Nifandray tamin'i Chau tamin'ny alàlan'ny adiresy mailaka izay hita tao amin'ny tranonkalany ny mpanoratra ity lahatsoratra ity. Ireto ambany ireto ny valintenin'i Chau tamin'ireo fanontaniana nalefa tany aminy:
Inona no nahatonga anao hanangana ity tranonkala ity?
-> Heveriko fa ny vaovaon'ny fitadiavako ny zanako vavy ato amin'ny tranonkala nguyenminhchau.com ity no hampahafantatra azy haingana manerana izao tontolo izao amin'ny hafangainam-pandehan'ny aterineto. Fantatro fa very izy 15 taona lasa izay, ary manantena aho fa hahafantatra izany vaovao izany ny zanako vavy ary hiverina aty an-tranonay.
Mino ve ianao fa afaka manome soso-kevitra vitsivitsy ny aterineto amin'ny fikarohanao ny zanakao tsy hita?
-> Eny, mino izany aho.
Naharay soritra na vaovao avy amin'ny mpisera aterineto momba ny zanakao ve ianao?
-> Nahazo tamberina sy torohevitra maro aho. Tena nilaiko tokoa ny sasany tamin'izy ireo mba hahitako ny zanako vavy
Hatreto, afa-po tamin'ny valinteny na ny fanehoan-kevitra azonao hatramin'ny nanangananao ity tranonkala ity ve ianao?
-> Tena faly aho tamin'ny fanampian'ny olona maro sy ny gazety. Nanome hery anay betsaka kokoa mba hitadiavana ny zanako vavy ny fanampian'izy ireo.
Nilaza i Chau fa nifandray tamin'ny olom-pirenena Amerikana iray izy izay nanolo-kevitra ny hampakatra sanda ny tranonkala nguyenminhchau.com ary hampiditra vaovao amin'ny fiteny telo samihafa: Kambodziana, Thailandey ary Shinoa. Vonona ny hanonta ny sarin'ny zanakavavin'i Chau eo amin'ny fonon'ny vokatra vokariny ny fikambanana iray manondrana entana any Kambodza.
Tamin'ny alalan'ity mailaka ity no nifandraisana tamin'i Chau sy ny havany : truonghoangthai158@yahoo.com
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/04/09/117485/
 hafatra fampidirana: http://www.nguyenminhchau.com/